(၇)နှဈကွာေ အာငျ တိတျတခိုးခြ ဈခဲ့ရတဲ့ခဈြ သူလေးနဲ့ တရားဝငျထိမျွး မားလကျ ထပျနိုငျခဲ့တဲ့ MRTV-4 မှ မငျးသားခြော ဝယေံလငျး – Shwe Likes
ပရိတျ သတျကွီးရေ…. MRTV4ရုပျသံဇာ တျလ မျးတှဲရဲ့မငျးသားတ ဈလကျွ ဖဈတဲ့ သရုပျဆော ငျဝယေံလငျးဟာ ဆိုရငျ ကရြာ ဇာတျရုပျတိုငျး မှပွီပွငျပိုငျနို ငျစှာသရုပျေ ဆာငျနိုငျ တဲ့အတှကျ ပရိတျသတျတှရေဲ့ တခဲနကျ အားပေးခွငျးကို ခံခဲ့ရတဲ့မငျးသားတ ဈလကျပွဲ ဖဈပါတ ယျနျော။
မိုးကောငျက ငျအိမျမကျ ဇာတျလ မျးတှဲမှာ ဆိုငျးမိုငျရဲ့သူင ယျခငျြး ခဈြခဈြအွ ဖဈပါဝငျ ခဲ့တဲ့အပွငျ ခဈြသူထှငျးတဲ့ အက်ခရာဇာတျ လမျးတှဲမှာလညျး ကြောငျးဆ ရာကာရိုကျတာနဲ့ပါဝငျ ခဲ့တာလညျးဖွ ဈပါတယျနျော။
ဝယေံလငျးဟာဆို ရငျအမှတျတ ရားဘကျကရပျတ ညျပွီးစဈအာဏာရှငျကိုဆန့ျကငျြနတေဲ့သူ တဈယောကျဖွ ဈပါတယျ၊
ဒီကနေ့ မှာဆိုရငျ ဝယေံလငျးကသူအရ မျးခဈြရတဲ့ခဈြသူလေးနဲ့တရား ဝငျလကျ ထကျလိုကျကွော ငျးကိုယခုလို ပဲရေးသားဖျောပွလာပါတယျ။
”သူမကိုရနှဈ အတှငျးအကွိမျကွိမျမွငျ ဖူးပါလကျြခိုွး ကညျ့မိပွနျတယျဟော လှပွနျပွီ ”ဆိုပွီးရေးသားေ ဖျာပွလာ ပါတယျ၊ပရိတျသ တျကွီးကလညျး ဝယေံလ ငျးတို့ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ လကျထပျမင်ျဂလာ ပှဲလေးကို ဂုဏျပွုစကာွးေ ပာခဲ့ပါအုံးနျော..Credit
ပရိတ် သတ်ကြီးရေ…. MRTV4ရုပ်သံဇာ တ်လ မ်းတွဲရဲ့မင်းသားတ စ်လက်ြ ဖစ်တဲ့ သရုပ်ဆော င်ဝေယံလင်းဟာ ဆိုရင် ကျရာ ဇာတ်ရုပ်တိုင်း မှပြီပြင်ပိုင်နို င်စွာသရုပ်ေ ဆာင်နိုင် တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ တခဲနက် အားပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့မင်းသားတ စ်လက်ပြဲ ဖစ်ပါတ ယ်နော်။
မိုးကောင်က င်အိမ်မက် ဇာတ်လ မ်းတွဲမှာ ဆိုင်းမိုင်ရဲ့သူင ယ်ချင်း ချစ်ချစ်အြ ဖစ်ပါဝင် ခဲ့တဲ့အပြင် ချစ်သူထွင်းတဲ့ အက္ခရာဇာတ် လမ်းတွဲမှာလည်း ကျောင်းဆ ရာကာရိုက်တာနဲ့ပါဝင် ခဲ့တာလည်းဖြ စ်ပါတယ်နော်။
ဝေယံလင်းဟာဆို ရင်အမှတ်တ ရားဘက်ကရပ်တ ည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြ စ်ပါတယ်၊
ဒီကနေ့ မှာဆိုရင် ဝေယံလင်းကသူအရ မ်းချစ်ရတဲ့ချစ်သူလေးနဲ့တရား ဝင်လက် ထက်လိုက်ကြော င်းကိုယခုလို ပဲရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်။
”သူမကိုရနှစ် အတွင်းအကြိမ်ကြိမ်မြင် ဖူးပါလျက်ခိုြး ကည့်မိပြန်တယ်ဟော လှပြန်ပြီ ”ဆိုပြီးရေးသားေ ဖ်ာပြလာ ပါတယ်၊ပရိတ်သ တ်ကြီးကလည်း ဝေယံလ င်းတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာ ပွဲလေးကို ဂုဏ်ပြုစကာြးေ ပာခဲ့ပါအုံးနော်..Credit